China Cactus Gymnocalycium Mihanovichii var. ụlọ ọrụ friedrichii na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Gymnocalycium mihanovichii bụ ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na osisi kaktus. N'oge ọkọchị, ọ na-agba okooko osisi pink, okooko osisi na mkpuru osisi mara mma. Potted gymnocalycium mihanovichii na-eji icho mma mbara ihu na tebụl, mee ka ime ụlọ jupụta na ihie. Enwere ike ijikọ ya na obere obere succulents iji mepụta etiti ma ọ bụ ilele karama, nke bụkwa ihe pụrụ iche.
Size: 5.5cm, 8.5cm, 10.5cm
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: ụfụfụ igbe / katọn / osisi ikpe
Ebute oge: ụbọchị 20 mgbe na-anata ego
Àgwà na-eto ：
Gymnocalycium mihanovicii bụ genus nke Cactaceae, nke si na Brazil, oge uto ya bụ oge ọkọchị.
Okpomọkụ kwesịrị ekwesị dị 20 ~ 25 ℃. Ọ na-enwe mmasị na gburugburu ebe na-ekpo ọkụ, akọrọ na anwụ na-acha. Ọ na-eguzogide ọgwụ na ọkara ndo na unwu, ọ bụghị oyi, na-atụ egwu nke mmiri na ìhè siri ike.
Gbanwee ite: Gbanwee ite na May kwa afọ, na-abụkarị afọ 3 ruo 5, ngalaba ndị ahụ na-acha ma na-aka nká, ọ dịkwa mkpa ịtọgharị bọl ahụ iji mee ka ọ dị ọhụrụ. Ala apiti bu ala gwakọtara nke ahihia ahihia, ala ohia na aja.
Watgbara mmiri: Spgba mmiri na okirikiri otu ugboro kwa ụbọchị ruo ụbọchị abụọ n’oge uto iji mee ka okirikiri ahụ dị ọhụrụ ma na-egbuke egbuke.
Fatịlaịza: Fatịlaịza otu ugboro n'ọnwa n'oge uto.
Ìhè dị ọkụ: ìhè zuru ezu. Mgbe ọkụ dị oke ike, nye ndo kwesịrị ekwesị n’ehihie iji zere ọkụ na gburugburu. N'oge oyi, a na-achọ ọtụtụ anwụ na-acha. Ọ bụrụ na ọkụ ezughi oke, ahụmịhe bọọlụ ga - achagharị.
Nke gara aga: Succulent Plants Fleshy Plant Live For Dechọ Mma Homelọ
Osote: China anyadokwa kaktus Succulent Plants Home Plant
Ndị Ọzọ Nọ n'Suzọ
China anyadokwa kaktus Succulent Plants Home Plant
Golden Barrel kaktus Echinocactus Grusonii Hildm
Succulent Plants Fleshy Plant Live N'ihi na Home Dec ...